မောင်လူပေ – အမေတို့ရွာ (၅) – MoeMaKa Burmese News & Media
မောင်လူပေ – အမေတို့ရွာ (၅)
(မိုးမခ) စက်တင်ဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၄
အမေတို့ရွာ ရောက်ပြီး သုံးရက်ခန့်တွင် ရွာဦးကျောင်းကထိန်ပွဲနှင့်တိုးသည်။ ရွာ၏စုပေါင်းအလှူပွဲမို့ ပျော်စရာကောင်းလှသည်။ ဝိုင်းလုပ်ဝိုင်းစားစနစ်ကို မျက်ဝါးထင်ထင် မြင်ခဲ့ခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။
အလှူအကြိုနေ့တွင် အိမ်များမှ ထမင်းစားပွဲဝိုင်းကြီးများ ကိုယ်တိုင်ထမ်းပြီး လာပို့ကြရသည်။ ကြွေထမင်းပန်းကန်၊ ဟင်းပန်းကန်များလည်း ထို့အတူပင်။ အားလုံးမှာ နာမည်ထိုးပြီးသားမို့ မှားရန်မရှိ။ ညနေမှာ အလှူအတွက် ရေခပ်ဖို့ အပျိုတသိုက် ရေတွင်းဆင်းကြသည်။ ဒီအချိန်ကား ကာလသားလူပျိုတသိုက်အတွက် အချိန်ကောင်းပင်။ ကိုယ်ကြိုက်သော အပျိုကို ရေငင်ပေးရင်း ပိုးကြသော အချိန်မို့ ရေတွင်းကုန်းမှာ တရုန်းရုန်းနှင့် ပျော်စရာပင်။
ရေခတ်ပြီးသည်နှင့် ဇီးဖြူသီးခူးကြရပြီ။ ကာလသားများက အပင်ပေါ်တက် လှုပ်ချ၊ ကျလာသော အသီးများကို ရွာသူများကကောက်ရသည်။ ထို့နောက် ဆုံထဲထည့်ကာ လေးစိတ်ကွဲထောင်း အစေ့တွေဖယ် အသားတွေစုနှင့် ဇီးဖြူသီးသုပ်ရန်ပြင်ကြရသည်။ ငပိထောင်းကြ၊ ပုဇွန်ခြောက်ထောင်းကြ၊ နှင့် တက်ညီလက်ညီပင်။ မိုးပြဲဒယ်ကြီးဖြင့် ထမင်းချက်သူကချက် ငါးခြောက်ကျော်သူကကျော် မည်သူမျှမနားကြရ။ တစ်ညလုံးလည်း ငွေပဒေသာပင်များ ဆင်ကြသေး၏။
နောက်နေ့မနက်တွင်တော့ ငွေပဒေသာပင်များထမ်းကာ အိုးစည် ဒိုးပတ် အကအခုန် စုံစွာဖြင့် ရွာပတ်ကာ ရွာဦးကျောင်းသို့ ချီတက်လေပြီ။ တီးမှုတ်ကခုန်ပြီး တရားနာကြ။ ပြီးတော့ အကျွေးအမွေးစတင်ပါပြီ။ စုပေါင်းအလှူမို့ အသားစိုမပါ။ ထုံးစံအတိုင်း ငါးခြောက်ကျော်၊ ဇီးဖြူသီးထောင်း၊ ပဲဟင်း ဒါပဲ ကျွေးမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ လူအုပ်က ဆွမ်းစားဆောင်အောက်မှာ အပြည့်။ အိမ်ဆူးဆို့၊ ကလေးလက်တို့၊ခွေးအို့အို့ ဟုဆိုရမည့် လှည်းနေ လှေအောင်း မြင်းဇောင်းမကျန် တရွာလုံး လာအားပေးကြခြင်းပင်။
အရင်ရောက်သူများကို ဆေးလိပ်ကမ်းထားပြီးပြီမို့ ထမင်းစားလက်မှတ် ဆေးလိပ်ရသူများသာ ဆွမ်းစားကျောင်းပေါ်တက်စားခွင့်ရမည်။ နောက်ကြသူများက ကမ်းထားသော ဆေးလိပ်ဖွာရင်း ထိုင်စောင့်ပေရော့ပင်။ အပေါ်က အုပ်စု စားပြီး ပန်းကန်တွေဆေး၊ စားပွဲ သုတ်သင်ပြီးမှ နောက်အုပ်စုတက်ခွင့်ရမှာမ်ို့ မြန်မြန်စားပါဗျိုး၊ ဗိုက်ဆာလှပြီ၊ မပြီးကြသေးဘူးလား စသည်ဖြင့် အပေါ်ကလူများကို စကြနောက်ကြသေးသည်။
အိမ်မှာ စားနေကြ ထမင်းနှင့်ဟင်းကို ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ တိုးဝှေ့ စားကြခြင်းအကြောင်းတခုက ပျော်စရာအတွက်။ သူတို့မှာ ပျော်စရာ ရှားလှသည်မို့ ဒီကထိန်ပွဲလေးမှာ ကြံဖန်ပြီး ပျော်ကြရခြင်းလည်းဖြစ်သည်။ ကထိန်ထမင်းစားရင် အသက်ရှည်တယ်ဟူသော အယူအဆတစ်မျိုးလည်း ရှိသေးပေသည်။
ရွာကျောင်းက ရွှေကျင်ကျောင်းမို့ အသံချဲ့ စက်မဖွင့်ရ။ ပွဲမသွင်းရပေမဲ့ ရွာခြင်းကပ်ဖြစ်သော ပြင်ထောင်ရွာမှ ကထိန်ကတော့ ပွဲသွင်းခွင့်ပြုသည်။ ထို့ ကြောင့် နောက်တစ်နေ့ ပြင်ထောင်ကျောင်း ကထိန်ည ပွဲခင်းသို့ နေရာကောင်းမှ ရှုစားနိုင်ရေးအတွက် ဝတ်ကောင်းစားလှ မျက်နှာခြေများလိမ်းကျံကာ အပျိုတသိုက်ထွက်ကြပြီ။ သူတို့ ကို ပိုးကြမည့် ကာလသားတသိုက်ကလည်း ကပ်လျှက်ပင် လိုက်ပါလာကြသည်။
ဒီပွဲကလည်း ရာဇဝင်နဲ့။ ပွဲအတွက် ငွေစိုက်ထုတ် အကုန်ခံသူက မင်းသားလုပ်မည့်သူ။ သူ့မိန်းမက သဘောမတူ။ ထို့ကြောင့် မြို့က အငြိမ့်မင်းသမီးငှားပြီး ရွာအပြန် လင်မယား စကားများကာ မိန်းမက အဆိပ်သောက်သောကြောင့် ဆေးရုံရောက်ရသေး၏။ မသေတာကံကောင်း။ နောက်ဆုံးတော့ မိန်းမကပင် စိတ်လျှော့ သဘောတူရသည်တဲ့။ ပွဲခင်းက ရွာအပြင် ကွင်းပြင်သာမှာ။ လေးတိုင်စင်သာသာစင်လေးဖြင့် မီးစက်သံများကိုလွှမ်းစေရန် အော်လံမှ တွံတေးသိန်းတန်၏ သီချင်းသံသာများဖွင့်ထားပေးသည်။ ပွဲစတော့ စိုင်းထီးဆိုင်၊ ဇော်မင်းလေးသီချင်းများဖြင့် တေးသရုပ်ဖေါ်များကို ကတတ်သလို ကပြ ဖျော်ဖြေကြသည်။ အားလုံးမျှော်လင့်ထားတဲ့ တစ်ခန်းရပ်ပြဇာတ်မှာတော့ ရွာခံငွေစိုက်ထုပ်သူက မင်းသား၊ မြို့က အငြိမ့်မင်းသမီး ညိုညက်ညက်က မင်းသမီး။ သရုပ်ဆောင် မကောင်းကြသော်လည်း လက်ခုပ်သံ တဖြောင်းဖြောင်းနှင့် အားပေးကြလေသည်။
ပွဲသို့ အတူလိုက်ပါလာသော ကာလသားလေးထံ ကလေးချီထားသော ဖြူဖြူချောချော မိန်းကလေးတယောက် လာနှုတ်ဆက်သည်။ ။သူမပြန်သွားပြီးနောက်ပိုင်း ထိုသူ မျက်နှာမကောင်းတော့။ မေးကြည့်တော့ ထင်တဲ့အတိုင်း။ သူတဖက်သပ် ချစ်ရတဲ့ ကောင်မလေး။ ရွာစင်လှည့်ပြီး အသံချဲ့စက်ဖွင့်သည့် စက်ဆရာနောက် မနှစ်က ပါသွားခြင်းကြောင့် ခုတော့ ကလေးပင် ရနေလေပြီ။ သူတို့ဆီမှာ စက်ဆရာက မိန်းချောလေးတွေ ဝိုင်းနေသူပင်။ နားထောင်ချင်တဲ့ သီချင်းတောင်းဖို့ အသံချဲ့စက်ဖွင့်သူ စက်ဆရာနား ကပ်ကြရသည် မဟုတ်လား။ ဒီတော့ စက်ဆရာက မိန်းမချောလေးများကိုသာ ဦးစားပေးသည်တဲ့။ ချောရင် သူ့နောက်ပါတာပါပဲဟု ငြီးတွားရှာ၏။
အကိုတို့ဆီမယ်တော့ အပျိုချောတွေပေါမှာပေါ့။ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာတော့ နဲနဲချောရင် သိပ်မကြာဖူး။ စက်ဆရာ သုတ်ရင်သုတ်၊ မသုတ်ရင် ကားဆရာသုတ်တာပဲအကိုရယ်တဲ့။ မြို့ပေါ်တက်ရင် ကားဆရာက ဘုရင်ပင်။ ကားခေါင်းခန်းဆိုတာ သံဃာတော်မပါရင် အပျိုချောကိုသာ ဦးစားပေးသည်။ ကျန်သူအားလုံး ခေါင်မိုးပေါ်တက်ကြရမည်သာ။
အမေတို့ ရွာမှာ နှစ်ပတ်နေခဲ့စဉ် ခင်ခဲ့ရသော ရွယ်တူ ကာလသားများက အကိုဟု ရိုသေစွာ ခေါ်ကြသည်။ သူတို့ ဆီမှာ ဆယ်တန်းအောင်သူလည်း မရှိသလောက်ရှားလှသည်။ ရွာမှာ မူလတန်းကျောင်းလေးသာရှိပြီး ဘုန်းကြီးကျောင်းနှင့်တွဲရက်ဖြစ်သော ဒီကျောင်းလေးမှာ ဆရာ မလာသည်ကများလေသည်မို့ကလေးတွေမှာ ကျောင်းတက်ချိန်တွင် ဆော့ကစားရင်းသာ အချိန်ကုန်ကြရသည်။
မူလတန်းအောင်လျှင် ရွာနှင့် နှစ်မိုင်ကျော်ဝေးသော ရွှေပန်းတောရွာ အလယ်တန်းကျောင်းသို့သွားရသည်။ ထို အလယ်တန်းကျောင်းလောက် ဆက်တက်သူပင် ခပ်ရှားရှား။ အလယ်တန်းကျောင်းနှင့်တွဲဖွင့်ထားသည့် တွဲဖက် အထက်တန်းကျောင်းလေးမှာတော့ ရွာနီးချုပ်စပ်မှ လာတက်သည့် ကျောင်းသား အနည်းငယ်သာရှိသည်။ သူတို့ ဆီမှာတော့ နဲနဲ အရွယ်ရောက်ပြီဆိုလျှင် နွားကျောင်း၊ လယ်ထဲဆင်း၊ ထင်းခွေ၊ နွားနိုင်ပြီဆိုလျှင် လယ်ထွန်ပြီး လယ်သမားလုပ်ရတော့သည်သာ။
သေစာရှင်စာဖတ်တတ် တော်ရောပေါ့။ စာရေးစာချီ လုပ်မှာမှမဟုတ်တာ။ ကျောင်းထားရင် ကုန်မဲ့ငွေကို နွားမလေးဝယ်မွေးတောင် နွားနို့ သောက်ရ၊ နွားသားပေါက်ရနဲ့ဟန်ကြသေးဟု ပညာရေးကို နားမလည် အားမပေးတတ်သည့် တွေးခေါ်မှုဟောင်းတွေကလည်း အားကောင်းဆဲပင်။ ပညာကို အားပေးသော အဖိုးကြောင့်သာ ဦးလေးနှစ်ဦး ထူးချွန်ခဲ့သော်လည်း သူတို့ ခြေရာ နင်းနိုင်သူ မပေါ်ထွက်သေး။
ကာလသားလေးများထဲတွင် လိမ္မာသော လူငယ်များလည်း ရှိသည်။ အများစုက ညနေဆိုလျှင် ထန်းရည်ဆိုင် အရက်ပုန်းဆိုင်တို့ တွင် အချိန်ဖြုံးကြသော်လည်း သူတို့ က ရွာဦးကျောင်းတွင် လုပ်အားပေးကြသည်။ ဘုန်းကြီးကျောင်းအတွက် ထင်းခွေ၊ရေခပ်၊အမှိုက်လှဲ၊မြက်ခုတ်နှင့် လုပ်ကြတော့ ဝိုင်းကူရင်း ကုသိုလ် ယူခဲ့သည်။ သူတို့ က သင်္ကြန်ကို ရွာပြန်လာစေချင်သည်။ ရွာ သင်္ကြန်က ပျော်စရာကောင်းသည်တဲ့။ ရေလောင်းချင်တဲ့ အပျိုအိမ် သွားခွင့်ပန်ပြီး လောင်းကြသည်။ ပျော်စရာ အကောင်းဆုံးမို့ပြန်ခဲ့စေချင်သော်လည်း နောက်ထပ် မပြန်ဖြစ်တော့။
ရွာနားရှိ ငါးရက်တစ်ဈေးဖြစ်သော ရွှေပန်းတောဈေးကတော့ မနက်ခင်းလေးသာ စည်ကားသော ဈေးလေးဖြစ်သည်။ ကုန်စုံဆိုင်လေးတွေလည်း ရောင်းကောင်းပုံမရ။ သူတို့ ဒေသ မုန့် ဟင်းခါးကတော့ ပဲဟင်းနှင့်စားရသော အညာဒေသ မုန့် ဟင်းခါးမျိုးပင်။ ငါးရှားသည့်ဒေသ မဟုတ်လား။ ငါးပိ ငါးခြောက်တို့ ကိုသာ အားထားကြရသည်။
မြေလတ်ဒေသဆိုသော်လည်း သစ်ပင်ကြီးတွေက ခေတ်အဆက်ဆက် ခုတ်ခဲ့ကြသည်မို့ပူပြင်းခြောက်သွေ့ ရာဒေသလေး။ ခုတော့လည်း ခေတ်အပြောင်းမှာ ထော်လာဂျီ ပိုင်ရှင် တောဂေါ်လီများက သယ်ယူပို့ ဆောင်ရေး နေရာယူကြပြီ။ မြို့ လှချောင်းကို ကိုယ်ထူကိုယ်ထ သစ်သားတံတားထိုးထားသော်လည်း ရေတိုက်စားမှုကြောင့် မကြာခဏ ကျိုးပျက်မြဲပင်။ တရုတ်ဆိုင်ကယ် တဖုံးဖုံးနှင့် သွားလာနိုင်ပြီ ဆိုသော်လည်း နွားလှည်းက်ုလည်း လက်မလွှတ်နိုင်သေး။နွားနှင့်သာ လယ်ထွန်နေရဆဲ။ လက်မှုလယ်ယာမှ စက်မှုလယ်ယာသို့ဆိုသည့် ဆောင်ပုဒ်မှာလည်း ရာဇဝင်ထဲတွင် ကျန်နေဆဲ။ ရွာသူရွာသားမှားလည်း ဆင်းရဲတွင်းမှ ရုံးမထွက်နိုင်သေးပဲ တဝဲလည်လည် ဖြစ်နေကြဆဲပင်။
ခေတ်ပြောင်းချိန် တစ်ခုမှာတော့ အမေတို့ ရွာလို ခေတ်နောက်ကျကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ရွာတွေ တိုးတက်လာမည် ထင်ပါသည်။ ထိုအချိန်တွင် ခေတ်မှီဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်သောနိုင်ငံတော်သစ်နဲ့ အညီ အမေတို့ ရွာလေးကို လျှပ်စစ်မီးတွေ တထိန်ထိန်မှာ စည်ဗျောသံတွေဝေတဲ့ ထမင်းရေချောင်းစီး အလှူကြီးတွေနဲ့ မြင်ရပါလိမ့်မည်။ ရေတွေဖောသီပြီး တရွာလုံးလည်းသန့် ရှင်းလို့ ။ ဒါဆိုလျှင် ကျွန်းလုံးခံတပ်ကို ကမ္ဘာကိုပင် ကြွားနိုင်ပေမည်။ တနေ့ နေ့ ပေါ့လေ။ တနေ့ နေ့ ပေါ့။
www.artmajeur.com – Incoming to village. Painting. Aung Min Min Myanmar [Burma].
← ထွန်းဝင်းငြိမ်း – မိုင်တိုင် ၅၂
၀ိသေသ – တစ်ဦးတည်းသောသားကို ပြန်ရွေးဖို့ →
သင့်မြတ် (ချင်းတွင်း) – “အယ်လ်နီညိုတဲ့လား
ရသဆောင်းပါးစုံ ခေတ်ပြိုင်အတွေ့အကြုံ မြင့်ကျော်